ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရှေးဟောင်းရတနာသိုက် (၅) ခု… – Manawmaya
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရှေးဟောင်းရတနာသိုက် (၅) ခု…
By မနောမယ / November 27, 2017
၁။ နာဇီတွေရဲ့ရတနာသိုက် (Nazi Gold in Austria’s Lake Toplitz)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခါနီးမှာ နာဇီတွေဟာ သူတို့စစ်ရှုံးတော့မှာကို ရိပ်မိခဲ့တဲ့အတွက် ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေ၊ ပြတိုက်တွေဆီက အဓမ္မသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ စိန်ရွှေငွေရတနာတွေကို ဂျာမဏီနိုင်ငံကို ပြန်လည်သယ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ရွှေတန်ချိန်ပေါင်း ၃ဝဝနဲ့ ရတနာတွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ ရထားဟာ ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ လျှို့ဝှက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ လိုက်လံပစ်ခတ်တဲ့အတွက် ရတနာတွေအားလုံးကို သြစတီးယားတောင်ခါးပန်းကြားမှာရှိတဲ့ တော့ပ်လစ်ရေကန် (Lake Toplitz) ထဲကို မြှုပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။ ရေကန်ထဲမှာ ရတနာတွေရှိမှန်းအတိအကျသိပေမယ့် ကန်ရေပြင်ရဲ့အအေးဒဏ်ကြောင့် ရတနာရှာတဲ့ ရေငုတ်သမားတွေသေဆုံးခဲ့တာ (၇) ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ရေတွေကို စက်နဲ့ စုတ်ထုတ်ပစ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တော့ပ်လစ်ရေကန်ဟာ အလျား ၁.၂မိုင်ရှည်ပြီး အနံက ၁၃ဝဝပေရှိပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့အနက်ဟာ ၃၃၈ပေရှိတဲ့အတွက် အတော်ကြီးတဲ့ ရေကန်လို့သာ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အခုချိန်ထိ ရတနာသိုက်ကို ဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ကဲ . . . အချိန်ရရင် သွားဖော်ရအောင်နော်။
၂။ မုတ်ဆိတ်နက်ရတနာသိုက် (Blackbeard’s Treasure)
မုတ်ဆိတ်နက် (Blackbeard) ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြကိုတော့ Pirates of the Caribbean ဇာတ်ကားမှာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အပြင်လောကမှာ တကယ်ရှိတဲ့လူကို ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Blackbeard ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ အက်ဒ်ဝက်တီးခ်ျ (Edward Teach) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်နက်ဟာ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်နဲ့ ဗြိတိန်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကို ပြဲပြဲစင်အောင် လုယက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၇၁၇ခုနှစ်ဟာ မုတ်ဆိတ်နက်ဟာ ပြင်သစ်ကျွန်သင်္ဘော Lac Concorde ကို လုယက်ပြီး Queen Anne’s Revenge လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရေတပ်ဗိုလ် ရောဘတ်မေနာ (Lieutenant Robert Maynard) ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ သူ့ရဲ့ပင်လယ်ဓားပြအဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၁၉၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့မှာ ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်နက်ဟာ သူမသေခင် ဝှက်ထားတဲ့ရတနာသိုက်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပေမယ့် နေရာအတိအကျကိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ အခုချိန်မှာတော့ ပင်လယ်ဓားပြကြီး မုတ်ဆိတ်နက်ရဲ့ရတနာသိုက်ဟာ ယုံတမ်းစကားအဖြစ်ပဲ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။
၃။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ပိုင်တီတီရွှေမြို့တော် (The Secret City of Paititi)
ပိုင်တီတီမြို့ဟာ အင်ကာ (Inca) လူမျိုးတွေရဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး ပီရူးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ဘိုလစ်ဗီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အင်းဒီးစ်တောင်တန်းမှာ တည်ရှိတယ်လို့ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။ ရှေးကတည်းက ချမ်းသာလာခဲ့တဲ့ အင်ကာလူမျိုးတွေကို စပိန်လူမျိုးတွေက ၁၅၃၂ခုနှစ်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်မနိုင်မှန်း ကြိုသိနေတဲ့ အင်ကာလူမျိုးတွေဟာ ပိုင်ဆိုင်သမျှရတနာတွေကို ပိုင်တီတီမြို့ဆီကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၅၇၂ခုနှစ်မှာ စပိန်တွေဟာ စစ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဘာကိုမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မရခဲ့ပါဘူး။ စပိန်တွေက အမေဇုန်တောကြီးထဲကို ရွှေ့ပြောင်းသွားတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှလမ်စမရတော့ဘဲ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရွှေမြို့တော်အနေနဲ့သာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ကာလတန်ကြေးနဲ့ဆို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဘီလီယံလောက် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Treasure of San Jose
၄။ ဆန်ဂျို့စ်သင်္ဘောရတနာသိုက် (Treasure of San Jose)
၁၇ဝ၂ခုနှစ်မှာ စပိန်ဘုရင် ဖီးလစ်ဗွီ (Philip V) နန်းဆက်ခံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်နဲ့ သြစတီးယားတို့နဲ့ စပိန်ဟာ စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုနောင်တစ်ချိန်မှာ စပိန်နန်းလုစစ်ပွဲ (War of the Spanish Succession) ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ၁၇ဝ၈ခုနှစ်မှာ စပိန်နိုင်ငံဟာ စစ်ပွဲအတွက် ငွေကြေးလိုအပ်လာလို့ ကိုလိုနီနယ်မြေတွေက သိမ်းယူရရှိထားတဲ့ ရတနာတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ သင်္ဘောကြီးဟာ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် ကာတာဂီနာကမ်းလွန် (Cartagena) မှာ နစ်မြုပ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ၎ရက်နေ့က ကိုလံဘီယာအစိုးရက သင်္ဘောကြီးရဲ့တည်နေရာကို တွေ့ရှိပြီလို့ ကြေညာခဲ့ပေမယ့် စပိန်အစိုးရနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ လီယွန်ထရာဘူကိုရဲ့ ရတနာသိုက် (Leon Trabuco’s Gold)
လီယွန်ထရာဘူကိုဟာ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်တာကို ရိပ်မိတဲ့အတွက် လီယွန်ထရာဘူကိုဟာ ရွှေချိန်၁၆တန်ကို ကြိုတင်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၉ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားကပ်ပျက်ဆိုက်တော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာဈေးတွေ ထိုးကျပြီးတော့ ရွှေဈေးတွေဟာ တဟုန်ထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ ၁၉၃၄ခုနှစ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ရွှေတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားရင် တရားမဝင်ဘူးလို့ Gold Reserve Law သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် လီယွန်ထရာဘူကိုဟာ ပိုင်ဆိုင်သမျှရွှေချောင်းတွေကို နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ် (New Mexico) ဖာမင်တန်မြို့ (Farmington) အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ သဲကန္တာရထဲမှာ မြှုပ်နှံလိုက်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတော့ သူဌေးကြီးလီယွန်ထရာဘူလည်း သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် ရတနာသိုက်အတိအကျလည်း ဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူး။ ရတနာသိုက်မုဆိုးတွေလည်း ရှာဖွေကြပေမယ့် အခုချိန်ထိ ရှာမတွေ့ကြသေးပါဘူး။
ကဲ . . . ဒါတွေကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ ရတနာသိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရတနာသိုက်ရှိရင် ဥစ္စာစောင့်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ရတနာသိုက်ဆိုတာ အင်မတန်ကံကောင်းတဲ့သူမှသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်နားမှာရှိပေမယ့်လည်း မသိကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ အားလုံးဗဟုသုတတိုးပွားကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
Credit ; ThuTaStar
ကြှနျးကို လေးထောငျ့ကှကျအုပျထားသော ဉာဏျလမျးကွောငျးအကွောငျး သိစကွေောငျး
“ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း “